လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #272
သူ့မိတ်ဆွေလေယာဉ်မှူးတစ်ဦး Heartattack ရှိပါတယ်ပြီးနောက်က Man, အသေးစားလေယာဉ်မြား
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #277
အင်း .. ဒါကြီးကြီးပဲ။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်။
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #281
ဤသည်ခရီးသည်ငါ SAR တွင်ဒုနှင့်အတူသဘောတူ ,, တဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ် reconize ရပါမည်!
သူကဒီအဖြစ်အများအပြားကြည့်ဖို့ totaly ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ် ,, ညဉ့်ကျဆုံးခြင်းအဖြစ်အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်မယ်လို့ရှိနေဆဲ
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #282
ထိတ်လန့်၏ပြောရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူ YT တခုတခုအပေါ်မှာ ATC မှတ်တမ်းတင်ရှိပါတယ်။ Guy Cessna ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုပျံများနှင့်ဘယ်နေရာမှာထဲကမကောင်းတဲ့တင်းကုပ်သို့သွားသည်ကို၎င်း, OUT FREAKS ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ Hilary ။ နှင့်အညီ, yeah သူတစ်ဦးလေယာဉ်မှူးသည်။
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #283
ငါတဦးတည်းငါထင်ကြောင်းကိုသိမြင်ခဲ့ဘူး ,,, ငါမှာတဦးတည်းကသင်၏ Point ကိုသိထင်ပါတယ် ...
သင်နှင့်ငါအချို့အရပ်သားမိမိတို့၏ပုဂ္ဂလိကလိုင်စင်ရတယ်ဘယ်လောက်အံ့သြခဲ့ပါတယ်အချိန်တွင်ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ,, Betwen
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #290
ရုံ wow .... အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်!
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #291
ဒီနေရာမှာငါတို့မှာ 'ko ti dade vozacku' 'ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်ရှိတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ ' မင်းကဒီလိုင်စင်ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးခဲ့တာလဲ။ '' လို့ငါထင်တယ်။
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #295
ကောင်းသောတဦးတည်း Dariussssss ,,, ကဒီမှာအဟောင်းစကားပုံ ,,, သူတို့တစ်တွေ CrakerJACK box ထဲကလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်တယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ,,,
Gh0stRider203 ,,, ဟုတ်ကဲ့အံ့သြဖွယ် ,, တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းအတွက်အံ့ဖွယ်အချို့ကိုမျိုး ...
သူ့မိတ်ဆွေ (သေလွန်သောသူတို့သည်လေယာဉ်မှူး RIP) နဲ့တူပုံရသည်သူ့ကိုစောင့်ရှောက် ယူ. သူ့ကိုမြေပေါ်မှာလုံခြုံစွာဒီလေယာဉ်အရကူညီပေးခဲ့။
ဒီ gentelmen သည်သူ၏စတင်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပြီးမသွားရှည်လျား ,,, ကိုသိ ,,, မဟုတ်တဦးတည်းအရာသေချာကောင်းမွန်သည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်
လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သူခရီးသည်3နှစ်ပေါင်း4months ago #329
yeah ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုမပါဘဲ, အဲဒီမှာဗိုလ်မှူးကြီးသဘောတူရန်ရှိသည်မယ်လို့